रु ३० लाख बजेट प्राप्त भएपछी बुर्तिबाङ–रिनाम सडक निर्माण कार्य सुरु हुने ! – ebaglung.com
रु ३० लाख बजेट प्राप्त भएपछी बुर्तिबाङ–रिनाम सडक निर्माण कार्य सुरु हुने !
२०७३ फाल्गुन १०, मंगलवार ०८:०१	Top News, थप समाचार
डम्बर बुढामगर, बुर्तिवाङ २०७३ फागुन १० । बुर्तिबाङ –रिनाम सडक निर्माण कार्य पुन: सुचारु हुने भएको छ । गत बर्ष करीब २५ लाख लागतमा तिन किलोमिटर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको उतm सडक खण्डमा यस बर्ष सडक डिभिजन कार्यालयको २० लाख र सांसद बिकास पुर्वाधार निर्माण कोषको १० लाख गरी कुल ३० लाख लागतमा सडक निर्माण कार्यसुचारु भएको समितीका अध्यक्ष चुडामणि जैसीले बताए ।
बुर्तिबाङको स्वरबोट देखि वडा नँ ५ को रिनाम हुँदै भिमगिठे गाविसको वडा नँ ६ माझखर्क असारे जोड्ने लक्ष्यका साथ निर्माणाधीन सडक हाल रिनाम स्थित बाघखोर अँधेरी भन्ने स्थान सम्म पुर्याईएको छ । गत बर्ष स्थानियको १४ लाख, सांसद बिकास कोषको ९ लाख ५० हजार र बुर्तिबाङ गाविसको २ लाख गरी २५ लाख पचास हजार बजेटमा उतm सडक निर्माण गरीएको थियो ।
सडक निर्माणका क्रममा पहरो र निर्माणाधीन सडक देखि तल मध्य पहाडी लोकमार्गको ब्यस्त सडक भएका कारण जोखिमले काम गर्नु पर्दा धेरै बजेट खर्च भएकोे हो । निर्माण हुन बाँकि खण्डकको रिनाम भिँयालखर्क हुँदै असारे माझखर्क सम्म पुर्याईने र त्यहाँ भिमगिठे देखि जोडिने सडकमा लगि टुँगिने छ ।
सडक निर्माण सँगै दुई गाविसको सम्बन्ध र कृषि प्रर्बदनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरीएको स्थानीय मोलाल शर्माले बताए ।
अधिकारीचौर घैया खानीका अग्नि पीडितलाई एमालेद्वारा राहत प्रदान !